Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia » Ụdị Indonesia ọhụrụ: Na-arụsi ọrụ ike, mara mma na obi eziokwu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • ndị mmadụ • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na akụ na ụba okike, Sandiaga Salahuddin Uno, gbara ndị na-eme ihe nkiri akụ na ụba ume ka ha leba anya n'akụkụ ọrụ ha na-adigide, iji mee ka mmezu nke njem nlegharị anya dị mma. Sandiaga kwuru nke a mgbe ọ gara na "Kriya Kayu Rik Rok" na Magelang, Central Java, Indonesia.
Network Tourism Network kpọrọ HE Sandiago Uno onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya ọha n'ụwa. Nke a mere na Machị 9, 2021.
Na Nọvemba 21,2021, otu onye ozi ahụ webatara ụkpụrụ 4 AS - usoro anwansi ya iji mee ka ndị ọbịa 11 furu efu laghachi na obodo ya.
Onye ozi njem nlegharị anya nke Indonesia nwere nchekwube na 4 AS ga-abụ isi ụkpụrụ maka njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji wughachi azụmaahịa ha na ịtụte akụ na ụba mba.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na akụ na ụba okike nke Indonesia na-akpakọrịta mmelite nke nkwụsi ike na ịsọ mpi iji kwalite ntulite azụmaahịa mgbe oria ojoo COVID-19 meriri.
Iji mezuo ebumnuche ahụ, ndị ọrụ njem nlegharị anya nke Indonesia emepụtala mmemme na-elekwasị anya na ụkpụrụ "4 AS": ya bụ Kerja KerAS (na-arụsi ọrụ ike), CerdAS (smart work), TuntAS (nke ọma), na IkhlAS (ezigbo).
E hiwere ụkpụrụ “4 AS” ndị a na-esochi mmetụta COVID-19 na-efe efe na njem nlegharị anya na azụmaahịa okike n'ofe mba ahụ, ebe tupu mmachi mmekọrịta ọha na eze na nke akụ na ụba na-ekpebi ịgbasa mgbasa nke nje a, nwere nde mmadụ 16.11 bịarutere njem nlegharị anya na 2019 wee daa. 75% ruo 4.02 nde na 2020.
Na-akwalite nkwụghachi azụ azụmaahịa site na ọzụzụ azụmaahịa dijitalụ.
Gọọmenti anọwo na-arụ ọrụ a site n'ikesa mgbake mgbake maka njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'ime ọkara mbụ nke 2020, ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na Indonesia nwere mfu ihe ruru puku ijeri 85 rupiah Indonesian na ego ndị njem nlegharị anya, ebe atụmatụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. mfu nke ihe ruru trillion 70 Rupiah Indonesian.
Otu n'ime mmemme a bụ atụmatụ maka ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Islam akpọrọ "Santri Digitalpreneur Indonesia" nke na-elekwasị anya na ọzụzụ na inye ndụmọdụ "santri" (ụmụ akwụkwọ) ịmụta nkà dijitalụ ma jiri ha dị ka isi obodo ha iji ghọọ digitalpreneur ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Indonesia na-esonye na mkparita ụka WTN
Banyere Ministry of Tourism and Creative Economy IndonesianSite n'ọhụụ na-eme Indonesia ka ọ bụrụ ebe njem nlegharị anya nke ụwa, Ministry of Tourism and Creative Economy na-emepe emepe dị iche iche iji nọgide na-eto eto na-emepụta ihe na Indonesia.
Ejiji ejiji maka ụmụ nwanyị Alakụba na-eto ngwa ngwa na Indonesia, yana ọchịchọ nke ịma mma na hijab. Ka ihe a na-achọsi ike na-abawanye, ndị na-emepụta obodo na-aga n'ihu na-emepụta uwe ụmụ nwanyị Muslim dị iche iche mara mma na nke pụrụ iche.
Kriya Kayu Rik Rok, nke dị na Magelang, Central Java, bụ akara mpaghara na-emepụta ma na-emepụta ọrụ aka nke sitere na ihe mkpofu na gburugburu ebe obibi gburugburu ụlọ ha. Rik Rok na-etinyekwa aka na njem mmụta maka ụmụaka ndị chọrọ ime njem mgbe ha na-amụ ihe dị ka batik, ịme ite, ịkọ mmanụ aṅụ, ịmụ gamelan, ịgba egwu na ndị ọzọ.
Ministri nke njem nlegharị anya na akụ na ụba okike na-ahụ na ndị egwuregwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Indonesia niile na-adịwanye njikere iji mejuputa CHSE (Ịdị ọcha, Ahụike, Nchekwa, na Environment Sustainability) asambodo usoro ahụike dabere.